ထိုင်းအစိုးရ၏ သင်္ကြန်ခွင့် ပထမရက်တွင် နေရပ်ပြန်မြန်မာ ၈ဝဝ ကျော်ရှိ - Yangon Media Group
ထိုင်းအစိုးရ၏ သင်္ကြန်ခွင့် ပထမရက်တွင် နေရပ်ပြန်မြန်မာ ၈ဝဝ ကျော်ရှိ
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၅
ထိုင်းအစိုးရ၏ သင်္ကြန်နေရပ်ပြန်ခွင့် စတင်အကျုံးဝင်သည့် ဧပြီ ၅ ရက်နေ့ တွင်ပင် နေရပ်ပြန်မြန်မာလုပ်သား ၈ဝဝ ကျော်ရှိကြောင်း မြဝတီမြို့ ကျောက်လုံးကြီးစခန်းစာရင်းအရ သိရသည်။ ထိုင်းရှိမြန်မာလုပ်သားများ အတွက် ထိုင်းအစိုးရမှသင်္ကြန်ကာ လနေရပ်ပြန်ခွင့်ကို ဧပြီ ၅ ရက် နေ့မှ ၃ဝ ရက်နေ့အထိ လဝက အဝင်အထွက် တုံးထုခအခမဲ့ဖြင့် လွတ်လပ်စွာပြန်ခွင့်ပြုထားခြင်း ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ခွင့်ပြုထားသည့် ရက်အတွင်းပြန်ဝင်ကြရန်လည်း သတိပေးထားသည်။
”ကျွန်တော်တို့ မြန်မာဘက် ကလည်း အခုလို၂၅ရက်ခွင့်နဲ့ ပြန်လာတဲ့အလုပ်သမားတွေကို ဘာ အခွန်အခမှမယူပါဘူး။ သင်္ကြန်ပြီး လို့ပြန်သွားကြမယ့် မြန်မာအလုပ် သမားတွေအနေနဲ့ဧပြီ ၃ဝ ရက် အတွင်းပြန်ကြဖို့တော့ လိုတာပေါ့ နော်။ အဲ့ဒီ ရက်ကျော်သွားရင် တော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့အခွန် အခတွေပေးရမယ်”ဟု မြဝတီခရိုင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ခရိုင်မှူးဦးဝင်းလှိုင်ဦးကပြောသည်။
နေရပ်ပြန်လုပ်သားများ အ နေနှင့် သတ်မှတ်ဂိတ်ပေါက်များ မှသာ ဝင်ထွက်ကြရန်၊ သတ်မှတ် ရက် မတိုင်မီပြန်သူများနှင့် သတ် မှတ်ရက်ထက် နောက်ကျမှဝင် ရောက်မည့်သူများအနေဖြင့် လဝကတံဆိပ်တုံးကို မဖြစ်မနေထုကြ ရန်နှင့် သတ်မှတ်အခွန် များကို ပေးဆောင်ကြရန်လည်း သတိပေး ထားသည်။ ”တံတားပေါ်မှာတော့ အခ မဲ့နဲ့ ၂၅ ရက်ကင်းလွတ်ခွင့်တုံး ထုပေးတယ်။ ထိုင်းကိုပြန်ဝင်ရင် လည်း အဲ့ဒါကိုပြပြီး ဝင်ရမှာပေါ့ နော်။ သတ်မှတ် ရက်ထက်ကျော် သွားရင်တော့ အကျုံးမဝင်တော့ ဘဲပယ်ဖျက်ခံရမယ်”ဟု နေရပ် ပြန့်အလုပ်သမားကို သိုင်းထွန်း ဇော်က ပြောသည်။
ZCH , KKTM
သမ္မတသစ် မိန့်ခွန်းနှင့် သတင်းမီဒီယာသမားများအတွက် မျှော်လင့်ချက်
မန်း သံပုရာကန် ရေနံချက်စက်ရုံအနီး ခရီးသည်တင် ယာဉ်တစ်စီး မီးလောင်
မန္တလေး မဟာအောင်မြေမြို့နယ် မဟာအရှေ့ရပ်ကွက်တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ရေမီတာ အလုံး ၁ဝဝဝ ခန့် အခမဲ့ တပ်ဆ?
လောဘသားကောင်များနဲ့ အိပ်မက်ထဲက အမြတ်ငွေ
ဆန်မီ ပထမဆုံး ကိုယ်တိုင်ရေး တေးအယ်လ်ဘမ်သစ် ထွက်မည်
ကျပ်သိန်းပေါင်း သောင်းချီ လိမ်လည်ခဲ့သည်ဆိုသော ဒေါ်နန္ဒမာလာကို အာမခံပေး၊ မပေး ဇန်နဝါရီ ၁၅ တွင?
ကားနှင့် ထော်လာဂျီ တိုက်မှုဖြစ်ပွားရာမှ VIGO ကားပေါ်မှ ဘိန်းဖြူ ကျပ်သိန်း၂၅ဝဝ ဖိုးနီးပါး တွေ့ရှ
စစ်ကိုင်းမြို့ ရာဇမဏိ စူဠာကောင်းမှုတော်စေတီ၏ တန်ဆောင်တိုင် ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော်တွင် မီးပုံးပ?